अनिल कपुर स्टारर सिनेमा ‘नायक’को सिक्वेल बन्ने ? « THE CINEMA TIMES
बक्स अफिस Release Date बिजनेस टक
इभेन्ट सेलिब्रिटी वालपेपर
अनाथ बालबालिकालाई ‘लभ स्टेशन’ निर्माण टिमको सहयोग
एलएका विद्यार्थीमाझ सलिनमानले गरे ‘यात्रा’को प्रचार
सदाबहार अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले दिइन एसईईको परिक्षा
अनमोल र सुहाना स्टारर ‘ए मेरो हजुर ३’को गीत ‘परान’लाई २४ घण्टा नपुग्दै दश लाख भ्युजको रेकर्ड
मल्टीस्टारर सिनेमा ‘लप्पन छप्पन २’को निर्माण घोषणा
‘ए मेरो हजुर ३’को गीतलाई युट्युबमा किर्तिमानी भ्युज, अनमोल र सुहानाको जोडीलाई प्रसंशाको ओइरो
रिलिजकै दिन पाइरेसीको मारमा पर्यो अक्षय र परिणीतीको ‘केसरी’
अनिल कपुर स्टारर सिनेमा ‘नायक’को सिक्वेल बन्ने ?
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – बलिउड अभिनेता अनलि कपूर २२ फेब्रअरीमा रिलिजको तयारीमा रहेको बहुप्रतिक्षीत सिनेमा ’टोटल धमाल’ को प्रमोशनमा व्यस्त छन् । तर, अहिले उनके १९ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको सुपरहिट सिनेमा ’नायक : द रियल हिरो’को सिक्वेल बन्ने चर्चा छ ।
खबरअनुसार, यो सिनेमाको सिक्वेलको अहिले तयारी चलिरहेको छ । यस सिनेमाका निर्देशकले अहिले सिक्वेल बनाउनेबारे सोचिरहेको चर्चा बलिउडमा भैरहेको छ । राजनीतिक एक्सन थ्रिलर सिनेमाको सिक्वेलको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा अनिल कपूरले भने, ’मलाई लाग्छ कि ’नायक’ को सिक्वेल निमार्ण एक राम्रो विचार हुनेछ ।’
’नायक’ एस. शंकरको हिट तमिल सिनेमा ’मुधलवन’ को रिमेक थियो । २००१ मा आएको सिनेमामा कसरी एक आम मानिस भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्छ भन्ने देखाइएको थियो । सिनेमामा रानी मुखर्जी र स्वर्गीय अमरीश पुरीको पनि प्रमुख भूमिका थियो ।
अनलि कपूर चाँडै एक सिनेमामा नेगेटिभ रोलमा देखिँदैछन् । खबरअनुसार, आदित्य रोय कपूर र दिशा पाटनी स्टारर एक्सन थ्रिलर सिनेमामा उनी नेगेटिभ रोलमा देखिनेछन् । यसलाई ’सोनू के टीटू की स्वीटी’ का निर्देशक लभ रञ्जनले निर्देशन गर्दैछन् ।
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – भेट्रान निर्देशक उज्वल घिमिरेको निर्देशनमा तयार भएको सिनेमा हो ‘लभ
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सम्राट शाक्यको डेव्यु निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमा ‘यात्राः अ म्युजिकल
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – आज चत्रै १० गते आइतबारबाट एसईईको परिक्षा सुरु भएको छ
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – सुपरस्टार अनमोल केसी र डेव्यु गर्ल सुहाना थापा फिचर्ड लोक
अनमोल र सुहाना स्टारर 'ए मेरो हजुर ३'को गीत 'परान'लाई २४ घण्टा नपुग्दै दश लाख भ्युजको रेकर्ड
'ए मेरो हजुर ३'को गीतलाई युट्युबमा किर्तिमानी भ्युज, अनमोल र सुहानाको जोडीलाई प्रसंशाको ओइरो